Jeegaanta Dhanka Aan Ka Joogsaday | Hangool News
Jeegaanta Dhanka Aan Ka Joogsaday
December 3, 2017 - Written by Hangool
Dhalashada hanaanka siyaasadeed ee dimuqraadigu waxay soo martay waddo dheer oo dhib iyo dhacadiidba lahayd ,taasoo kasoo bilaabantay kacdoonkii ingiriiska ee la odhan jiray magna carta kuna tisqaaday kacaankii faransiiska ee 1707 .
Hadaba geedi socodkaa boqolaalka sanadood socday ayaa aakhirkii ku biyo shubtay hirdanka axsaaabta siyaasadeed oo ku kala abtirsata aragtiyihii loolanku u dhaxeeyay iyo taageerayaashooda .
Axsaaabta conservative ka ,Republican ka iyo kuwa ay bah wadaagta yihiin ayaa u taagan aragtida dabaqadiha awood ku macaasha halka xisbiyada shaqaalaha ,dimuqraadiga iyo kuway ay bah wadaagta yihiin u taagan yihiin dareenka dabaqadaha hoose iyo dhexe .
Hadaba somaliland xisbiyadeedu waa kuwo aan lahayn sumad iyo sawrac
ay ku kala duwan yihiin ,taasoo in badan lagga dooday aragtiyaha ay xaambaarsan yihiin .
Hadaba erey bixinta jeegaanta ee soo korodhay ayaa noqon karta bar bilowga aasaaska aragtida cusub ee siyaasada somaliland .
Dib u curashada ereygan oo kasoo tafiirmay jabhadii snm ka dibna kusoo laabtay xisbiga kulmiye oo ay Jaran jaradiisa isu baneeyeen hor joogayaashii snm ayaa noqon karta sumad ku riixda naadiyada axsaabta mayalka adag ee burjuwaasigga ah .
Halka xisbiga waddani oo ah xisbi furfuran oo u janjeedha dhinaca dhalinyarada shaqaalaha iyo daba qadaha dhexe uu qaadan karro sawraca axsaabta qunyar socodka ah .
Sidaas darteedna jeegaantu dhankaan ka joogsaday waxay noqon kartaa jaho cusub oo siyaasada somaliland u dhaqaaqday taasoo bud dhig u noqon karta Dhalashada siyaasada somaliland ta cusub